ဝင်းဦး | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / ၀င်းဦး
Category Archives: ၀င်းဦး
March 1, 2012 classical ၀င်းဦး Myanmar Oldie Albums ပတ်ပျိုးသီချင်းများ ဝင်းဦး မဟာဂီတ Leaveacomment
အလင်္ကာကျော်စွာစောင်းဦးဘသန်း နဲ့ အဆိုတော်ကြီးဝင်းဦး ပါ။ အပြန်အလန် စကားပြောလေးလဲ ပါပါတယ်။ ဒီသီချင်း က ပတ်ပျိုး အမျိုးအစားပါ။ ကုန်းဘောင်ခေတ် သာယာဝတီမင်းရဲ့ အနောက်နန်းမိဘုရား မမြကလေး စပ်ဆိုခဲ့တာလို့ အမှတ်အသားရှိပါတယ်။ Download ချစ်သမျှကို
January 7, 2012 classical ဦးဘသန်း (စောင်း) အလင်္ကာကျော်စွာ ၀င်းဦး New International Albums ပတ်ပျိုးသီချင်းများ ဦးဘသန်း(စောင်း)အလင်္ကာကျော်စွာ ဝင်းဦး မဟာဂီတ2Comments
ဒီတခါတော့ အဆိုတော်ကြီး ဝင်းဦး ဆိုထားတဲ့ ယိုးဒယားသီချင်းပါ။ ပြောချင်တာကတော့နောက်ခံ ပုလွေအတီး ကိုသေ သေခြာခြာ နားထောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ download တောင်တောသာယာ
January 6, 2012 classical ၀င်းဦး Myanmar Oldie Albums ဝင်းဦး ယိုးဒယားသီချင်းများ မဟာဂီတ Leaveacomment
Win Oo Gold Collection Vol.08
၀၁ မနွမ်းတစ်ပွင့် ၀၂ နှင်းသက်ဆယ်ပြန် ၀၃ ဆောင်းရယ်နှင်းရယ် ကိုယ့်ချစ်သူရယ် ၀၄ လွမ်းငွေ့ ဝေေ၀ ၀၅ အုံ့ ပုန်းချစ် ၀၆ မုန်းသော်လည်း မေ့မရသော မိန်းကလေး ၀၇ အလှဆုံး ၀၈ နွမ်းစိမ်း ၀၉ သဲလွန်းတယ်ဆိုချင်ဆို ၁၀ ငွေစန္ဒာရယ် ၁၁ ချစ်ဝေ့လည် ၁၂ ရွှေလည်တိုင် ၁၃ နှင်းဝေေ၀ ၁၄ ရှစ်တိုင်းအမ္ဗုန်
June 25, 2010 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ၀င်းဦး Myanmar Artist 8 Comments
Win Oo Gold Collection Vol.07
၀၁ စကားပြော ၀၂ မီးပုံပွဲ ၀၃ အလှကမ္ဘာမြေ ၀၄ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ၀၅ သီရိဂေဟာ ၀၆ မေခင်ကျွန်တော့်အချစ်တော် ၀၇ ချစ်ခရီး ၀၈ မုန်းတလှဲ့ ပြုံးတလှဲ့၀၉ ချစ်ကလိန် ၁၀ မန်းမြို့ သူဇာမေ ၁၁ ခေတ်လူပျို ၁၂ မြပဒေသာ ၁၃ မေတ္တာပန်းဥယျာဉ် ၁၄ မောင်တို့ ချယ်ရီမြေ ၁၅ ကြက်ညီနောင် ၁၆ ရုပ်ရှင်ရူးမလေး ၁၇ မာလာ ၁၈ ရင်မှပြန်သောတေး
June 25, 2010 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ၀င်းဦး Myanmar Artist6Comments
Win Oo Gold Collection Vol.12
၀၁ မြင်းခင်းတော် ၀၂ နန်းမြို့ တော် ၀၃ အလှပြိုင်ပွဲ ၀၄ မင်းသား ၀၅ ပုခက် ၀၆ လနဲ့ နေ ၀၇ သိန်းထီဆုကြီး ၀၈ လူပျိုအိပ်မက် ၀၉ သူဌေးဝါဒ ၁၀ ရွှေမိုးညို . Download Link
November 26, 2008 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ၀င်းဦး Myanmar Artist4Comments
Win Oo Gold Collection Vol.11
၀၁ မနွမ်းတစ်ပွင့် ၀၂ နှင်းသက်ဆယ်ပြန် ၀၃ ဆောင်းရယ်နှင်းရယ် ကိုယ့်ချစ်သူရယ် ၀၄ လွမ်းငွေ့ ဝေေ၀ ၀၅ အုံ့ ပုန်းချစ် ၀၆ မုန်းသော်လည်း မေ့မရသော မိန်းကလေး ၀၇ အလှဆုံး ၀၈ နွမ်းစိမ်း ၀၉ သဲလွန်းတယ်ဆိုချင်ဆို ၁၀ ငွေစန္ဒာရယ် ၁၁ ချစ်ဝေ့လည် ၁၂ ရွှေလည်တိုင် ၁၃ နှင်းဝေေ၀ ၁၄ ရှစ်တိုင်းအမ္ဗုန် ၁၅ သံယောဇဉ် ၁၆ ချစ်သူ့ မျက်နှာလေး ၁၇ မောင်ချစ်တယ် . Download Link
November 26, 2008 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ၀င်းဦး Myanmar Artist Leaveacomment
Win Oo Gold Collection Vol.10 (၀င်းဦး နှစ် ၂၀ ပြည့်)
၀၁ စကားပြော ၀၂ မီးပုံပွဲ ၀၃ အလှကမ္ဘာမြေ ၀၄ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ၀၅ သီရိဂေဟာ ၀၆ မေခင်ကျွန်တော့်အချစ်တော် ၀၇ ချစ်ခရီး ၀၈ မုန်းတလှဲ့ ပြုံးတလှဲ့၀၉ ချစ်ကလိန် ၁၀ မန်းမြို့ သူဇာမေ ၁၁ ခေတ်လူပျို ၁၂ မြပဒေသာ ၁၃ မေတ္တာပန်းဥယျာဉ် ၁၄ မောင်တို့ ချယ်ရီမြေ ၁၅ ကြက်ညီနောင် ၁၆ ရုပ်ရှင်ရူးမလေး ၁၇ မာလာ ၁၈ ရင်မှပြန်သောတေး . Download Link
November 26, 2008 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ၀င်းဦး Myanmar Artist3Comments